Guriga - Hagaha Xayawaanka - Taladii ugu dambeysay ee xayawaannada rabaayada ah ee khubarada xayawaanka
Hagaha Xayawaanka - Taladii ugu dambeysay ee xayawaannada rabaayada ah ee khubarada xayawaanka
Immisa ey ayaa aad ugu badan hal qoys? – Hagaha xayawaanka
Hagaha Xayawaanka - July 24, 2021
7 xawaash iyo dhir udgoon oo waxyeelo u leh caafimaadka Eyga ama bisadaha (La kashifay)
Hagaha Xayawaanka - November 29, 2021
7-da Bisadaha iyo Eyda ugu Wanaagsan ee u socdaalaya 2022 [Dib u eegis]
Hagaha Xayawaanka - February 17, 2022
Bisadda Black Maine Coon: Hagaha
Cats Hagaha Xayawaanka - Waxaa laga yaabaa 13, 2022 0
Daawaynta Boogaha Jiirka ee Bisadaha - 5 Talooyin oo aad Ogtahay
Cats Hagaha Xayawaanka - Waxaa laga yaabaa 12, 2022 0
Daawaynta Boogaha Jiirka ee Bisadaha Boogaha jiirka ee bisadaha, sidoo kalena loo yaqaan boogaha aan shaqaynayn, waa nabarro muuqaal daran oo saameeya bushimaha bisadaada. Waxay qayb ka yihiin...
Immisa Qiimaha Capybara?
Xayawaanka Hagaha Xayawaanka - Waxaa laga yaabaa 12, 2022 0
Immisa Qiimaha Capybara? Capybara waa xayawaan cusub oo caan ku noqday warshadaha xayawaanka. Asal ahaan waxa uu ka yimid Koonfurta iyo Bartamaha Ameerika, xayawaankan gaarka ah waa ...
5 Xaqiiqo oo Muhiim ah oo ku saabsan Capybara waxaad u baahan tahay inaad ogaato
Xaqiiqooyinka Muhiimka ah ee Ku Saabsan Capybara Haddii aad la yaaban tahay waxa ka dhigaya xayawaankan quruxda badan, sii akhri. Capybaras waa herbivores. Waxay ku nool yihiin kooxo qoys oo yaryar waxayna yihiin dabaasha degdeg ah. Waxay...
Maxaa Kabaybara Kaga Duwan Yihiin Xayawaanada Kale?
Maxaa Kabaybara Kaga Duwan Yihiin Xayawaanada Kale? Haddii aad waligaa la yaabtay waxa ka dhigaya capybaras gaar ah, waxaad timid meeshii saxda ahayd. Maqaalkani waxa uu sharxi doonaa wada noolaanshiyaha herbivore-ka-badeed-biyoodka iyo...
Capybara ma yihiin xayawaanno wanaagsan? – 5 Talooyin in la ogaado
Hagaha Xayawaanka - Waxaa laga yaabaa 12, 2022
Ma ka dhigi kartaa eygaaga inuu kugu dhoola cadeeyo?
Hagaha Xayawaanka - February 13, 2022
Hagaha Xayawaanka - Waxaa laga yaabaa 13, 2022 0
Bisadda Black Maine Coon: Hage Maxay noqon karaan dhawr kelmadood oo lagu qeexi karo bisaddaada ugu habboon? Ma weynaan lahayd, qalafsanaan lahayd, oo koolkoolin lahayd?...
Daawaynta Boogaha Jiirka ee Bisadaha - 5 Talooyin...
Hagaha Xayawaanka - Waxaa laga yaabaa 12, 2022 0
Daawaynta Boogaha Jiirka ee Bisadaha Nabarrada Jiirka ee bisadaha, sidoo kale loo yaqaano boogaha aan shaqayn, waa nabaro muuqaal daran oo saameeya bushimahaaga...
Immisa Ayuu Ku Kacaa Capybara? Capybara waa xayawaan cusub oo caan ku noqday warshadaha xayawaanka. Asal ahaan ka soo jeeda Koonfurta iyo Bartamaha...
Xaqiiqooyinka Muhiimka ah ee Ku Saabsan Capybara Haddii aad la yaaban tahay waxa ka dhigaya xayawaankan quruxda badan, sii akhri. Capybaras waa herbivores. Waxay ku nool yihiin kooxo qoys oo yar...
Maxaa Kabaybara Kaga Duwan Yihiin Xayawaanada Kale? Haddii aad waligaa la yaabtay waxa ka dhigaya capybaras gaar ah, waxaad timid meeshii saxda ahayd. Maqaalkani wuxuu sharxi doonaa...
Capybara ma yihiin xayawaanno wanaagsan? Kabybara ma yihiin xayawaanno wanaagsan? Xayawaankan ayaa ah kuwo aad u caqli badan waxaana lagu tababari karaa inay ku socdaan xadhigga. Waxay sidoo kale jecel yihiin ...
Bisadda Black Maine Coon: Hage Maxay noqon karaan dhawr kelmadood oo lagu qeexi karo bisaddaada ugu habboon? Ma weynaan lahayd, qalafsanaan lahayd, oo koolkoolin lahayd? Waxaan haystaa taranka ugu fiican...
Capybara ma yihiin xayawaanno wanaagsan? Kabybara ma yihiin xayawaanno wanaagsan? Xayawaankan ayaa ah kuwo aad u caqli badan waxaana lagu tababari karaa inay ku socdaan xadhigga. Waxay sidoo kale jecel yihiin capybaras kale waxayna noqon karaan ...
Waa maxay sababta ay daanyeeryadu u jecel yihiin bаnаns? - Daanyeeradu miyay cunaan cawska? Sare...
10ka nooc ee Bakaylaha ugu Caansan Caalamka
10-ka Ey ee ugu Qaalisan Adduunka: Waa maxay sababta...
Hagaha Xayawaanka - Soo hel talobixintii ugu dambaysay ee xawayaanka ee khubarada xayawaanka: Soo hel mawduucyo cusub iyo sheekooyin ku saabsan xayawaanka rabaayada ah iyo noocyada kala duwan ee xayawaanka.
Nala soo xiriir: petsguideinfo@gmail.com
© Xuquuqda daabacaadda 2021 - www.petsguide.info